News - LED plant light ၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
1. မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်ကြွယ်ဝသောအရောင်များ။ လက်ရှိ LEDs များသည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုရောင်စုံသန့်ရှင်းမှုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပြီးတော့ရ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရအရောင်အလင်းကိုအသုံးပြုသောမီးအလင်းရောင်နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသည်မီးအလင်းကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။
2, စူပါအသက်အရေအတွက်။ LED ၏အခွင့်အလမ်းသက်တမ်းသည်နာရီပေါင်း ၅၀၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်နေပြီး၎င်းသည်သာမန်အလင်းအရင်းအမြစ်များအကြိမ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်အကြိမ်များစွာပင်ဖြစ်သည်။
၃။ ရောင်ခြည်တွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မရှိပါ။ LED သည်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များ၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏တောက်ပသောအလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးအစိမ်းရောင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်များ၊ လက် ၀ တ်ရတနာဆိုင်များ၊ ပြတိုက်များ၊ အနုပညာပြခန်းများနှင့်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်နေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။
4. အစိုင်အခဲတောက်ပခြင်း၊ ကောင်းသောထိတ်လန့်ခြင်းခံနိုင်ရည်၊
၅။ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ချွေတာခြင်းနှင့်အကာအကွယ်မဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းသည် ၅၀% မှ ၈၀% အထိရှိသည်။
၆။ ပြောင်းလဲနေသောအရောင်ထိန်းချုပ်မှု၊ တောက်ပမှုနှင့်အမှောင်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ LED ၏အဓိကအရောင်သုံးမျိုးပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် PWM ကို သုံး၍ အရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြီးစေသည်။
၇။ LED တွင်အားကြီးသောအလင်းထုတ်လွှတ်သော ဦး တည်ချက်၊ မြင့်မားသောတောက်ပသော flux ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့် LED မီးအိမ်များ၏အလင်းပြင်းအားဖြန့်ဖြူးမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
၈။ LED ကို DC နိမ့်ဗို့အားဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
၉။ LED ကိုအင်ဂျင်အပူချိန်ဖြင့်ထိန်းချုပ်မထားပါ၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အနိမ့်ဗို့အား 110V မှစတင်သည်။ အပူချိန်နှင့်သက်ဆိုင်သောအင်ဂျင်ကိုမထိတွေ့ပါ၊ ၎င်းကိုယာယီစဖွင့ ်၍ တောက်ပသော flux output သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။